Rodiobook Podcast Republic
By Rodney Sann Lwin
Audiobooks for Myanmar short stories, essays and others literature that all i read. Support this podcast: https://anchor.fm/rodney-sann-lwin/support
တင်မောင်မြင့် - “ဘ၀အနှောင်” ဝတ္ထုရှည် အသံစာအုပ်
5376 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/40733808/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-09-24%2F989b41b44d02698e0f8ba48b5c1253fc.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1632404818865-9a62cdc6365d4.jpg 32545760560 cd2d9565-68f3-44e6-9b4e-ae1fb4f94d84
ဆရာတင်မောင်မြင့် မွေးနေ့အမှတ်တရ ဆရာတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး ဆမ်းမားဆက်မွန်မ် ရဲ့ အကောင်းဆုံးဝတ္ထုလို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ ‘ဘ၀အနှောင်’ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊
အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ကေျာ်ဖြတ်ကြတာပေါ့၊ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ။
--- Support this podcast: https://anchor.fm/rodney-sann-lwin/support
ဂျူး - “လိပ်ပြာဖမ်းသူ” ဝတ္ထုတို အသံစာအုပ်
937 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/40675803/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-8-22%2F5a08c017-e40c-dcce-c921-0b5716cb4bff.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1632316611456-b9eeccf8a69e9.jpg 32448918806 ad2d15ce-d2ea-4683-8d2d-0beaa48c94c6
ဆရာမဂျူး ရဲ့ မေွးနေ့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဆရာမဂျူးရဲ့ “လိပ်ပြာဖမ်းသူ” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊
ဆရာမ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျ။
မြသန်းတင့် - ရှားလော့ဟုမ်းပြန်လာပြီ စုံထောက်ဝတ္ထုများ အသံစာအုပ် (၁၃ ပိုင်း)
51887 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/39988504/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-09-21%2F64b4fe30aac243642868b075c3bdeb2c.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode400/6014997/6014997-1631106728681-672928b530be.jpg 31044076279 496ad402-1665-400a-91dd-3080aaa8e1a8
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ‘ရှားလော့ဟုမ်းပြန်လာပြီ’ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ဇာတ်လမ်းများကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊
မင်းလူ - အချစ်သည် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေသတည်း ဝတ္ထုရှည် (၁၀ ပိုင်း)
23465 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/39506479/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-09-07%2Fddd8d439c55df90c1001008f307886ea.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode400/6014997/6014997-1630245450909-a8a61082ad9f.jpg 29975747461 6bc887d9-b3bd-4917-a086-d3c2ef708731
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ‘အချစ်သည် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေသတည်း’ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ဝတ္ထုကောင်းတပုဒ်ပါ။
မင်းလူ - ခုနှစ်စဉ်အလွမ်း ဝတ္ထုရှည် အသံစာအုပ် (၇ ပိုင်း)
19475 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/39162464/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-08-28%2F00a9f16c4c6beb85a4eda097052254e5.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1629644654031-9bf42b8563f1d.jpg 29268607631 6caca2a5-f101-49db-a3ef-7a682e3b4d1f
ယခုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမယ့် ဝတ္ထုရှည်က ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ‘ခုနှစ်စဉ်အလွမ်း’ ပါ၊
ဒီဝတ္ထုကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာဆု၊ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု နဲ့ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုများကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုကောင်းတပုဒ်ပါ။
ဒီနိုဗို - မှန်သားမြို့တော် ဝတ္ထုရှည် အသံစာအုပ် (၆)ပိုင်း
19928 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/38857580/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-08-21%2Fb7129aaa8cdd8c6ff8639edba3d647a5.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1629116778346-8fca5eddf995e.jpg 28766085174 d4a43fb9-704b-495f-b2c9-58ca24681e9d
ယခုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမယ့် ဝတ္ထုရှည်က ဆရာဒီနိုဗို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ 'မှန်သားမြို့တော်' ပါ၊
ဇာတ်လမ်းက စုံထောက်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း၊ မှုခင်းစုံထောက် စာရေးဆရာက လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကိစ္စတခုမှာ ပတ်သက်ရှုပ်ထွေးပြီး သူ့ကိုယ်သူ ဘဝအမျိုးမျိုးနေရာကနေ ပရမ်းပတာ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ နားလည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့၊ လျို့ဝှက်သည်းဖို စွန့်စားခန်းဝတ္ထုကို ဒဿနဆန်ဆန် ရေးထားတဲ့၊ သမားရိုးကျ စုံထောက်ဝတ္ထုမျိုးမဟုတ်တဲ့ ပို့စ်မော်ဒန်ပုံစံဝတ္ထုတပုဒ်ပါ။
မူရင်းစာရေးသူ ပေါလ်အော်စတာ ဟာ ဒီ'မှန်သားမြို့တော်' ဝတ္ထုအတွက် တနှစ်တာ အကောင်းဆုံးလျို့ဝှက်သည်းဖိုဝတ္ထုအဖြစ် အဂ္ဂါအယ်လင်ပိုးစာပေဆု ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ မှန်သားမြို့တော် နဲ့ နောက်၂အုပ်၊ ၃အုပ်ပေါင်း (The New York Trilogy) အတွက်လည်း ဆုရရှိထားပြီး၊ အခြားဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာရရှိထားသူပါ။
ဂျူး - ဆဲတတ်သူများနှင့်တစ်ညနေ (ဝတ္ထုတို)
1138 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/38769736/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-7-14%2Fd7d33c36-f0cd-57e7-4d6e-9318709fa2f4.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1628946340749-181f667b56fec.jpg 28766085175 a69b3da3-b84a-498f-901f-af8cc093ea61
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ဆဲတတ်သူများနှင့်တစ်ညနေ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတို လေးကို ဖတ်ပြတာပါ။
သိစရာ တေွးစရာလေးတေွ ရရှိမယ်၊ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မေျှာ်လင့်ပါတယ်ဗျ။
အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
ဂျူး - အချစ်ဆိုတာကြိုးနဲ့သီဖို့မလိုတဲ့ပန်းပွင့်လေးတေွ(ဝတ္ထုတို) အသံစာအုပ်
1161 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/38735784/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-7-13%2Fae095307-43b5-acc5-8a93-08f716c99346.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1628871685761-d0893614aea62.jpg 28766085176 1722fc29-1a40-4310-9882-224856bc099b
ဆရာမဂျူး ရဲ့ အချစ်ဆိုတာကြိုးနဲ့သီဖို့မလိုတဲ့ပန်းပွင့်လေးတေွ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတို လေးကို ဖတ်ပြတာပါ။ အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
တင်မောင်မြင့် - တောင်ပံမဲ့သင်းကွဲတေးဆိုငှက် (၁၃ ပိုင်း)
40161 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/37217343/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-08-13%2Fcd865f636601688d10a8c5b1e47224c5.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1626264431725-f466e994595d8.jpg 25890934961 5aaa7329-f2c7-47b3-9443-92b703cc1fb5
ဆရာတင်မောင်မြင့် ရဲ့ “တောင်ပံမဲ့သင်းကွဲတေးဆိုငှက်” ဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်ဝတ္ထုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မြသန်းတင့် - ဓါးတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည် (၁၂ ပိုင်း)
31053 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/36386270/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-07-13%2F57be78ca98c86073aa53242c7d57870e.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1624973499307-21eec553b7408.jpg 25021859904 126841f7-1ddd-4d85-b89a-39827c5e50d9
ဆရာမြသန်းတင့် ရဲ့ “ဓါးတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
နိုင်ဝင်းဆွေ - “မဟူရာမေတ္တာ” ဝတ္ထု အသံစာအုပ် (၁၅ပိုင်း)
38593 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/35383605/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-07-01%2Fd005193c1b87b9c71a59e389718133d7.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1623585708905-814a528f67ba9.jpg 23760874631 7b76aa03-8ddc-4375-8bc5-7f101a6cb732
ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေ ရဲ့ “မဟူရာမေတ္တာ” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - ရိုမန်တစ်တစ္ဆေ ဝတ္ထုတို အသံစာအုပ်
1986 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/35343506/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-5-12%2Fc03779c1-0a2d-1cd1-1922-263b80bba978.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1623503077014-98df582cad082.jpg 23695226521 e1cb1a20-fbd5-44a7-989a-97d73b187387
ဆရာမဂျူး ရဲ့ "ရိုမန်တစ်တစ္ဆေ"ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - "သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင်" ဝတ္ထု (၁၉ပိုင်း)
48286 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/34060611/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-07-01%2F8164a5014578e54157da812f06a48086.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1621776075422-e4e5748dc43c7.jpg 22120425690 320a3aab-c504-42d3-af09-edb13eccdf29
ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ့ "သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင် "ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ --- Support this podcast: https://anchor.fm/rodney-sann-lwin/support
ဂျူး - သူရဲကောင်းတေွ မများလွန်းဘူးလား (အက်ဆေး)
934 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/34001628/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-4-22%2F18d90cf9-88d9-8ab8-19b0-2db9cff87e6c.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1621674171842-c6c87c255c789.jpg 22059699932 6a570d06-d08a-4f5a-8310-048e4cd69c91
ဆရာမဂျူး ရဲ့ သူရဲကောင်းတေွ မများလွန်းဘူးလား ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေး တပုဒ်ကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ။
ရီနေဆန်း - ရွံလို့ရေးတဲ့ စာ
485 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/31036318/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-3-9%2F987aef95-9ab2-4a30-440d-7d39055ee627.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1617946244513-f2ed99ed2c51c.jpg 19383396820 00590a39-1920-4bd8-9443-19d8fbf289a4
ဆရာမ ရီနေဆန်း ရေးတဲ့ ရွံလို့ရေးတဲ့ စာ ဆိုတဲ့ အရေးအသားလေးကို သဘောကျလို့ ဖတ်ပြဖြစ်တာပါ။
ဂျူး - တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုး (ဝတ္ထုရှည်)
22417 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/25367764/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-01-25%2F861c7ec7329a76983288ab5206c7ac31.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1610985114143-f4caf94926b0e.jpg 13103762740 49eba776-b4a6-4094-874b-27148af944fa
ကျနော့် မွေးနေ့အမှတ်တရ အဖြစ် ဆရာမဂျူး ရဲ့ “တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုး” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို မွေးလဖြစ်တဲ့ ဇန်နဝါရီလ မှာ အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ချင်းတောင်တန်း တွေနဲ့ တောင်ဇလပ်ပန်းတွေ၊ တိမ်စိုင်တိမ်လိပ်တွေကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတရင်းပေါ့ဗျာ။
ခွင့်ပြုပေးတဲ့ ချစ်ခင်လေးစားရပါသော ဆရာမဂျူးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင် ဂါရ၀ပြုပါတယ်ဗျ။
ကျော်လှိုင်ဦး - လေထန်ကုန်း
39642 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/24675824/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-01-13%2Fde5d25c5f1e15c86b905e3cb4eae608a.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1609600019760-4eec251ab5d5e.jpg 11899913835 daf5bec2-3aad-44fa-bd1e-8011ac9fd480
ဆရာကျော်လှိုင်ဦး ဘာသာပြန်တဲ့ “လေထန်ကုန်း” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
အေးမင်းစော - ဆောင်း
860 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/24412381/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-11-25%2F17461ef8-eb6f-9244-8229-da966dd0591f.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1608908164542-1fbbad0bd0c04.jpg 11318252577 8e02c3e3-231b-474b-9997-8d0cb6658b08
ဆရာအေးမင်းစော ရဲ့ ဆောင်း ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေး တစ်ပုဒ်ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မင်းလူ - ကောင်လေးရေ
1903 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/24303415/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-11-22%2F34dbfacf-32f1-5428-92ad-780b644cf4f6.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1608643255968-ba200b87d4bc8.jpg 11112131033 be80e0e5-1fe8-49dd-bdb9-42f02f66c313
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ကောင်လေးရေ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - နှင်းရက်ကြေွစော
6861 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/24115441/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-12-17%2Fecdb7450eee8efa1511208f8878b6fe6.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1608228041661-4ebc696a0bbeb.jpg 10776155318 d1d9d909-042d-4e75-93e4-64eeeeeddcb3
ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ့ “နှင်းရက်ကြေွစော” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ရေွှဥဒေါင်း - ရတနာသိုက်
40192 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/22949653/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-12-16%2F837471ce8a3648f9ed4823bf2e896f8e.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1606034818074-3a196d638951e.jpg 9212549100 c97237a3-0d9d-46da-b85d-5f46eff0fbca
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း ဘာသာပြန်တဲ့ “ရတနာသိုက်” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
တင်မောင်မြင့် - အချစ်များစွာနဲ့ပါ ဆရာ
22011 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/22581615/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-11-19%2Fe4d07cfb0dcb1ee20ac6d375b56cfd53.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1605366156122-2d7956f4013d7.jpg 8868169579 4638943b-305c-41e8-a4d0-1930eb4c4deb
ဆရာကြီးတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ "အချစ်များစွာနဲ့ပါ ဆရာ" ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - သူ့ကျွန်မခံပြီ
22791 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/22395790/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-11-10%2F397a73ee856ab1b676002519ab4378ac.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1605035486252-3fc6c5a01ce4.jpg 8742050604 37a69c80-37fd-4c87-8534-2690525e7959
ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ့ သူ့ကျွန်မခံပြီ ကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါဗျ။
ကြည်အေး - ဖုန်းသက်တိုင်
13878 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/21826753/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-11-10%2F23feb2f0ae23b635aa35dd46a1871b8b.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1603993293558-b0526e2212fef.jpg 8391357419 3133843f-48ed-410d-a044-29ef276860f0
ဆရာမကြီးကြည်အေး ရဲ့ ဖုန်းသက်တိုင် ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မင်းလူ - သုံးနားညီ
15715 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/21528036/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-10-26%2F2a7151c4194727d07018d07722ac2ee0.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1603451881441-72426cd274cbc.jpg 8216231662 4f31fefb-b347-44d4-800b-833315c36b68
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ သုံးနားညီ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
5798 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/21425016/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-10-21%2F157857305da43d45c6d03471d06809cb.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1603286985988-3dc1cb7f857db.jpg 8162721552 c5bcfd17-0f7f-4714-afcc-18839a48eef2
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးတဲ့ Freedom From Fear စာအုပ်ကို ဒေါက်တာအောင်ခင် ဘာသာပြန်တည်းဖြတ်သည့် "ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေ"း စာအုပ်မှ
"အောင်ဆန်း" ဆိုတဲ့ စာလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
သင့်လူ - နားစွင့်ကြားဟန် ရင်ခုန်သံ
27321 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/20858595/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-10-18%2F4032815cd82574b651f6f3c9cc0b754a.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1602267828289-bfe0c410d0fac.jpg 7840522450 1cc8d3e1-f63c-43fd-bcd2-f0b280bec9c2
ဆရာသင့်လူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ နားစွင့်ကြားဟန် ရင်ခုန်သံ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျာမနီစာရေးဆရာ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကလောမြို့နောက်ခံပြီး ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းဖွဲ့စာအုပ်လေးပါ။
မြသန်းတင့် - လေလွင့်သူ
27581 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/20286386/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-10-08%2Fb068b27f4bacb01d90f1af6d45eccbb0.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1601304049614-702c690e1356.jpg 7529575901 5508fd63-53f8-4066-9291-f15f6d2a356e
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လေလွင့်သူ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
တင်မောင်မြင့် - ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်
887 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19902102/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-20%2F19cc189b-139d-495d-16b2-7aeb4ff152da.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1600624767937-b541820a63cf9.jpg 7310595665 0b3c4ad8-7cef-4434-9368-1a7b4bf1d529
ဆရာတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ် ဆိုတာ မူရင်းတရုတ်နာမည်ကြီးစာရေးဆရာကြီး Ha Jin ရဲ့ A Bad Joke ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတင်မောင်မြင့် မေွးနေ့အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - မြစ်တစ်စင်း၏ ဟာမိုနီ
1661 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19897143/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-20%2F47aa3bad-7e23-ae72-6883-bbfe51d47218.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1600616482389-5b0cf29556a8.jpg 7310595666 4c8e008c-ceef-43d8-a092-73cb2303b260
ဆရာမဂျူး ရဲ့ မြစ်တစ်စင်း၏ ဟာမိုနီ ဆိုတဲ့ စာလေးကို ဒီနေ့ ဆရာမဂျူးရဲ့မေွးနေ့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဖတ်ပြတာပါ။
သက်ရှည် ကျန်းမာ ပေျာ်ရွှင်ပါစေ ဆရာမ။
ပိုင်စိုးဝေ - အမေ့အတွက် ကတ်တလောက် စာအုပ်သစ်
1038 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19896020/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-20%2F5b3111d6-89d2-33da-3d15-ef142f1de956.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1600615699224-b627f924aedc9.jpg 7310595667 cbeabd65-ebe3-43fb-b157-8ac9f2699868
ဆရာပိုင်စိုးဝေ ရဲ့ အမေ့အတွက် ကတ်တလောက် စာအုပ်သစ် ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို ကွယ်လွန်သူဆရာပိုင်စိုးဝေ အတွက် အမှတ်တရ ဖတ်ပြဖြစ်တာပါ။
ကောင်းမွန်ရာ ဘုံဌာနတစ်ခုမှာ အေးချမ်းသာယာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျ။
ဂျူး - သေတမ်းစာ
1787 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19890324/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-20%2F5ab0496e-fb55-4a44-0bc3-8834799280e6.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1600604573860-a41ef655cd862.jpg 7301852286 d4e4be32-ca46-4a68-bc51-c409750c6729
ဆရာမဂျူး ရဲ့ သေတမ်းစာ ဆိုတဲ့ စာလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ဒဂုန်တာရာ - မေ
18093 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19887324/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-10-01%2F2ced856c251485cff755e22c599f81a8.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1600595983314-62800b9d14f9c.jpg 7301852287 58f86205-d302-48fc-8910-d0d58e189259
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာ ရဲ့ မေ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မောင်ထွန်းသူ - လူတစ်ယောက် မြေဘယ်လောက်များများ လိုသလဲ
3510 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19806325/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-09-18%2Fc7a1ad6614dd897707b97911d7bc3ba9.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1600437127394-dbc989d1e7878.jpg 7248990760 1fa14c0e-7e10-4198-8ff0-446226074681
ဆရာမောင်ထွန်းသူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လီယိုတော်စတွိုင်း ရဲ့ လူတစ်ယောက် မြေဘယ်လောက်များများ လိုသလဲ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မောင်ဝဏ္ဏ - လို၍ မရသော ဆင်းရဲ
8255 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19803248/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-09-18%2F459c4a97c01cb393a1ddb2e770bb4428.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1600432967078-1b194391c1bd7.jpg 7248990761 bf39ef9d-b490-4139-8cc7-7a054f56afaa
ဆရာမောင်ဝဏ္ဏ ရဲ့ လို၍ မရသော ဆင်းရဲ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလတ်တစ်ပုဒ်ကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ။
မင်းလူ - ကေျာ်ကွန့်နှင့်လှထုံ
2523 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19475106/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-12%2Fdec022b3-31c8-490c-32ce-f17bcda8584a.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1599899662048-078416ce7d7.jpg 7066575619 4408c071-cfdc-4991-b8eb-5fa2eccfd833
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ရယ်မောခြင်းပေါင်းချုပ် စာအုပ်ထဲက ကေျာ်ကွန့်နှင့်လှထုံ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ဖတ်ပြတာပါ။
ရွှေဥဒေါင်း - ရှိန်းမကားရွာ လူသတ်မှု (မောင်စံရှား)
6127 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19364822/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-09-11%2Fdf306707193c044d7658c4b54bf79eaf.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1599723801214-12ad63292a559.jpg 7011039980 5e0ac1f0-95bc-42d2-969b-5b2514b8d2bc
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း ၏ မောင်စံရှား ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ရှိန်းမကားရွာ လူသတ်မှု ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ခင်မျိုးချစ် - အလွယ်လမ်း
2885 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19328199/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-9%2F697ab45b-a116-e6e8-7881-91801f5ce615.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1599670695226-c872e27d9dea1.jpg 6992650308 91917081-5442-4e14-9a3a-8c80ba981f05
ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ရဲ့ အလွယ်လမ်း ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
သော်တာဆေွ - သူလိုမိန်းမ
1802 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19326106/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-9%2F2bef1eed-4273-690b-227c-50f9e79ccfdc.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1599668992563-ae42ad3a3b94e.jpg 6992650309 3e89c27c-b100-4596-bfae-5f4885a293ee
ဆရာကြီးသော်တာဆေွ ရဲ့ သူလိုမိန်းမ ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ။
ဂျူး - အက်ဆစ်တစ်ခွက်
3469 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19155995/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-6%2F8d59f02e-4960-5960-f9aa-d4eb4ea0f201.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1599398811939-9ef9c788e6a11.jpg 6894415298 86862f80-8199-4e93-ac0d-e2498558fee0
ဆရာမဂျူး ရဲ့ အက်ဆစ်တစ်ခွက် ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ။
လင်္ကာရည်ကေျာ် - တစ်ပွင့်ကျန်
12230 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19153827/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-09-06%2Ff1207d23c9908138e3a049f03a147c8a.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1599393381190-18688b6d5082b.jpg 6894415299 a7cbef3a-21b3-487a-8bcb-6fb2d6a914d5
ဆရာလင်္ကာရည်ကေျာ် ရဲ့ တစ်ပွင့်ကျန် ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - သူမ၏ မိုး
2166 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19115124/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-5%2F7bca17ff-e4ea-e42b-82f8-a8cf2372942c.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1599309033141-143a9a5e15986.jpg 6871064459 2d784f35-1802-465c-b4fa-8dd0ffbbebb7
ဆရာမဂျူး ရဲ့ သူမ၏ မိုး ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း
2197 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/19072104/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-8-4%2Ff9ad205f-041b-fb78-3310-9a236f167fc3.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1599226812684-22f1e6f20ea5c.jpg 6837299374 4028101e-38f1-4144-a22b-deffeb490688
ဆရာမဂျူး ရဲ့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
အသံထွက်ဖတ်ပြတာမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
သင့်လူ - ဗိုလ်မှူးကြီးထံ စာရေးမည့်သူ မရှိပါ
11059 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18863484/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-09-04%2F466e2ac7c1b93e1d938b3335e6fc6198.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598893594658-4ea9180836c1b.jpg 6722222996 946da87c-b6a7-44c8-9306-b89c54858bdb
ဆရာသင့်လူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးထံ စာရေးမည့်သူ မရှိပါ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
အသံထွက်ဖတ်ပြတာမှာ မှားယွင်းမှု နှင့် လိုအပ်ချက်များ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
အေးမင်းစော - တရားရုံးများ
1211 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18801743/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-30%2Fc601cfdf-c9b4-5bf6-66e3-b6c7e73d33d3.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598891024271-f6b5be28c94bf.jpg 6722222997 42692275-79b5-4c52-a71e-ab8f9c8920bf
ဆရာအေးမင်းစော ရဲ့ တရားရုံးများ ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မိုးမိုး(အင်းလျား) - နေရဲသူ့ မြေနီခင်
4046 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18798682/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-30%2F1a48bd90-6cb7-52a9-9d59-79efc7254184.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598781539538-63f8f11a69dbf.jpg 6687239778 060f344d-cfd2-4a30-895a-f9df46b3fbe7
ဆရာမကြီးမိုးမိုး(အင်းလျား) ရဲ့ နေရဲသူ့ မြေနီခင် ကို ဖတ်ပြတာပါ။
အသံထွက်ဖတ်ပြတာမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့် တာဝန်ပါ။
သဲအိမ်မောင်နေဝါ - လွမ်းသူ့အိမ်
3410 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18603730/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-26%2F97d135cd-a062-925d-8653-726325abc545.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598423906760-17ca848ab618f.jpg 6585717423 d8195678-8155-4ebe-8443-1d3ac9f42fbf
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဆရာသဲအိမ်မောင်နေဝါ သို့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဆရာ့ရဲ့ လွမ်းသူ့အိမ် ကို ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - ချစ်သူဖတ်ဖို့စာ
1499 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18513287/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-24%2F2ebeef5a-13fc-2bd1-140a-1dfd72ddef44.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598281706740-82fe5ee86b08d.jpg 6557890585 411f1fd3-2f82-4336-b13f-c0d4a7fa5c42
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ချစ်သူဖတ်ဖို့စာ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
လိုအပ်ချက် မှားယွင်းမှုများ ရှိခဲ့လျှင် ကျနော့်တာဝန်ပါ။
မြသန်းတင့် - လူလေးသို့ပေးစာများ
13208 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18512251/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2021-08-11%2Fff8e825730bea3ba46072c252f7a99be.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598280599494-81623368151ae.jpg 6557890586 08bc3457-f202-4bbe-9b4c-19e0cb8ed3c9
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လူလေးသို့ပေးစာများ ကို အလျဉ်းသင့်သလို ဖတ်ပြပါ့မယ်ဗျ။
မြင့်သန်း - ရွာ၏ အခြားတစ်ဖက်ရှိ ခေျာင်းမှ ရေနောက်ကျိရသည့်အကြောင်း
680 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18511957/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-24%2F5afc7603-ea04-86d2-90d9-d52c98552d02.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598280301094-0dc965503d6ed.jpg 6557890587 a58f86d2-ead6-4066-af8e-0fddfa9d60b3
ဆရာမြင့်သန်း ရဲ့ ရွာ၏အခြားတစ်ဖက်ရှိ ခေျာင်းမှ ရေနောက်ကျိရသည့်အကြောင်း ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မင်းလူ - ပန်းကေျာင်း
18042 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18387322/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-08-28%2Ffa0406f8b61f1d7d0a96d59e75051933.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598035975011-eed0eeda6f2dc.jpg 6499505433 50bda46f-3f64-414e-85db-7e5c4e4ab994
ဆရာမင်းလူ ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လမှာ ဆရာ့အတွက် အမှတ်တရအနေနဲ့ ဆရာရဲ့ ပထမဆုံး ၀တုဖြစ်တဲ့ ပန်းကေျာင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - ကြိုး
1757 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18383428/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-21%2F8b28bb88-ce31-3056-fb91-87d2f07097e3.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1598032258024-ab849dd97b47c.jpg 6499505434 a09a1646-9e3b-4bbe-8fe5-7eba957c1f8e
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ကြိုး ဆိုတဲ့ စာလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မေဇော် - ကြယ်ငေးသူ (အက်ဆေး)
938 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18282965/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-19%2F540a642e-1763-2524-975b-ba8e5a081448.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1597861637116-7ae9eeb00fb58.jpg 6465451326 4ae59930-5276-4d4a-8b83-aa4183a44d9d
ဆရာမ မေဇော် ရဲ့ ကြယ်ငေးသူ ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေးကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ။
အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
မိုးသက်ဟန် - ရှင်နာဂါဝါမှ မေျာက်တစ်ကောင်
4064 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18282193/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-19%2F36e73f19-2ce8-7680-97e6-e9deb8276119.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1597860722360-a3b609f82aec9.jpg 6465451327 c739c83f-c6cc-48e7-ac26-0cfb6b111aa8
ဆရာမိုးသက်ဟန် ဘာသာပြန်တဲ့ ရှင်နာဂါဝါမှ မေျာက်တစ်ကောင် ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
မူရင်း ဂျပန်စာရေးဆရာ ဟာရူကီမူရာကာမိ ရဲ့ စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနိုဗို - ပျားရည်မုန့်
4422 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18281670/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-19%2F7a03c3ed-8826-6b90-5c89-45e3591212ed.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1597859983089-4c324d4037895.jpg 6465451328 b2b4294d-2a3d-4e2d-bc1e-77bf6bc4f6ea
ဆရာဒီနိုဗို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ပျားရည်မုန့် ဆိုတဲ့ ဂျပန်စာရေးဆရာ ဟာရူကီမူရာကာမိ ရဲ့ စာလေးတစ်ကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - ပေျာက်ဆုံးနေသော
1454 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18050066/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-14%2Fba33bef8-d262-c51e-0051-545ded84073b.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1597432491573-0a172bdfd2ad6.jpg 6337756561 7d1b1c33-14e2-478f-b0aa-d1b8f46508f6
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ပေျာက်ဆုံးနေသော ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - သစ်တစ်ပင်ကောင်း
1304 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/18049895/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-14%2F8da6e3e8-979c-6697-a5ca-d4c3669a11c4.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1597432171906-cefd52d77f086.jpg 6337756562 7d79b2df-d5ee-48ce-b2ae-16af30927185
ဆရာမဂျူး ရဲ့ သစ်တစ်ပင်ကောင်း ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ.
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မိုးညအိပ်မက်မြူ
24474 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/17755089/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-08-14%2F548f406a11447c30ff97a5880f280678.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1596917773463-166ad5a63b67f.jpg 6177704081 7e54cd45-df51-494d-a291-6db24a9323c9
ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ့ မိုးညအိပ်မက်မြူ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ဂျူး - တောင်တန်းကြီးတေွ အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါ
4455 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/17752702/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-8%2F55c7f6e4-445d-bafa-79bc-a88edf0e5abe.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1596913264232-afe7631bd0029.jpg 6169901089 730b7b97-eb85-4f93-beb4-6dcd897bfc1b
ဆရာမဂျူး ရဲ့ တောင်တန်းကြီးတေွ အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊
အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါခင်ဗျာ။
မြင့်သန်း - မစမ်းမြင့်ရဲ့ကျင်း
1798 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/17439399/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-7-2%2F3bc2e15b-7b93-5f85-6129-b89652417f81.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1596364785802-0c0073a21f288.jpg 6010659542 4633261b-a6ab-4660-a6ec-7dd65b6c3b35
ဆရာမြင့်သန်း ရေးတဲ့ မစမ်းမြင့်ရဲ့ကျင်း ကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ.
ကြည်အေး - ကျွန်မပညာသည် (၆ ပိုင်း)
12756 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/17436331/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-08-07%2F3a3503b9e6f4126f2504d8e9e457b556.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1596358116540-c4ff39d71d9aa.jpg 6010659543 8873c1f7-000c-4b81-b279-9d7188369d04
ကျွန်မပညာသည်'သည် ဆရာမကြီး ကြည်အေးရဲ့ လက်ရာကောင်းများစွာထဲက တစ်အုပ်ဖြစ်သည်ကို ဖတ်ဖူးသူများ သိပေမည်။
ဂျူး - ကေျာက်တိုင် ၂ခု
2015 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/17260430/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-6-29%2F5f44bece-ad6e-1376-42c9-d32bd508fab8.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1596034661785-c7b0bd5afdc51.jpg 5918868938 6d7923e6-3be3-4d01-8bc9-526e651be951
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ကေျာက်တိုင် ၂ခု ကို အသံထွက်ဖတ်ပြထားတာပါ.
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - လွမ်း
14255 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/17081248/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-07-29%2F7c8b8dd0b7fc52c5df96c58282a927e4.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1595692257550-e82a2ccb75b6e.jpg 5820747187 7274ccf2-2f9b-4147-8b9e-4e20938d1c18
ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ့ လွမ်း ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ.
မောင်ဆုရှင် - ပင်လယ်ပြာနဲ့ တံငါအို
13604 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16748945/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-07-25%2F908de74affde3c18133195b677eabcc4.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1595079498373-b798d900260ab.jpg 5650279878 65d357d4-ba49-4bb9-83a0-2feda7b99e2a
မောင်ဆုရှင် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည့် ဟဲမင်းဝေး၏ ကမ္ဘာကျော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် "ပင်လယ်ပြာနဲ့တံငါအို" ဝတ္ထုကို Audio Book အဖြစ် အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မောင်ဆုရှင် ဘာသာပြန်ဆိုသော "ပင်လယ်ပြာနဲ့ တံငါအို" ဝတ္ထုသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားစာပေဆု (ဘာသာပြန် ပထမဆု) ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဟဲမင်းဝေး ရေးသားသော "ပင်လယ်ပြာနဲ့ တံငါအို " ဝတ္ထုသည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် စာပေလောကတွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သော ပူလစ်ဇာစာပေဆုကို ရရှိခဲ့သည်၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင်လည်း ဟဲမင်းဝေးသည် ယင်းဝတ္ထုကို အကြောင်းပြုပြီး စာပေဆိုင်ရာ နိုဗယ်လ်ဆုကြီး ချီးမြှင့်ခံရပြန်သည်.
၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ယင်းဝတ္ထုကိုဟောလိ၀ုဒ်မှ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
ဟဲမင်းဝေးသည် အသက်၆၃နှစ်အရွယ် ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေသည်။
မေဇော် - ဟိုးအဝေးကြီးကကြယ် (အက် ဆေး)
1058 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16606951/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-6-15%2Fa94f24e0-832f-2c21-ba70-c883bdff68bc.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1594815432065-698f7e5cef33d.jpg 5566610477 aafa1a80-6f01-42b1-a893-369301bc863c
ဆရာမမေဇော် ရဲ့ ဟိုးအဝေးကြီးကကြယ် ဆိုတဲ့ အက်ဆေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ.
မင်းလူ - သူ့ဆံပင်နှင်းဆီပွင့်တေွနဲ့
12170 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16497329/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-11-04%2F80c9010d13988aedb5be68320a4f8934.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1594625198844-e2354c30cae93.jpg 5506259887 8b75f98f-1202-4a32-909c-4a70d9e7edf4
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ သူ့ဆံပင်နှင်းဆီပွင့်တေွနဲ့ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ.
ပြည့်စုံဝင်း - ရေချမ်းစင် (အက်ဆေး)
647 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16497115/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-6-13%2Fdb0f0784-c1e3-bcbe-95c2-9b9d6f3635e7.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1594624664219-3756c0abe6fc3.jpg 5506259888 1e8e77ba-8498-4436-a9b0-d808972fad24
ဆရာမပြည့်စုံဝင်း ရ ဲ့ အက်ဆေးလေးတေွကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ.
အက်ဆေး (၁၀)ပုဒ် ပါပါတယ်ဗျ
ရေအေး - တိမ်ဖုံးတဲ့လ
1544 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16462578/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-6-12%2Fb18a2945-21bc-b76b-baa9-4550315fc67f.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1594567281603-e3dbb59e553f8.jpg 5485587506 dc68060d-973d-476b-84ff-9a73f4341f1e
ဆရာရေအေး ရဲ့ တိမ်ဖုံးတဲ့လ ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ဂျူး - မီးလျှံငှက်
2750 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16389010/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-6-10%2F93e06c78-6ca3-87fb-a40e-719664dd8cd7.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1594405474693-6509aa627a81f.jpg 5427916338 e6737260-c85e-43bf-9cea-79534de8f91b
ဆရာမဂျူး ရဲ့ မီးလျှံငှက် ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ကြည်အေး - တမ်းတတတ်သည်
8027 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16292506/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-07-10%2F094f3005dec2bde6caf2b5455d35622e.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1594228450027-24427d3beda3.jpg 5366544948 7f7e5388-8ca6-46aa-a1af-99f82913846b
ဆရာမကြီးကြည်အေး ရဲ့ တမ်းတတတ်သည် ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ.
စဆုံး အပိုင်း(၄)ပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးပါ့မယ်.
မေဇော် - စိတ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုးတေွ
739 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16291770/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-6-8%2F88b1c297-067e-8fea-cd5a-4742969d0e98.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1594227302099-128812f7dfc44.jpg 5366544949 1199d013-9a44-493b-a203-cff5b2e5ca0d
ဆရာမမေဇော် ရဲ့ စိတ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုးတေွ ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေးကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ဂျူး - တိရစာန်နဲ့လူ
1352 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16291533/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-6-8%2Fe435db7c-76ad-ba48-cd35-823b4d6a3ceb.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1594226887568-a850c39ffc645.jpg 5366544950 c329c8df-45e7-4623-b799-9863a2a40ee7
ဆရာမဂျူး ရဲ့ တိရစာန်နဲ့လူ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ရေအေး - မောင်မောင့်ခနာကိုယ်ထဲမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ကျုးကေျာ်နေထိုင်
8895 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/16106687/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-07-04%2Fc81255ae8ab2ed2d8e17e6b2eb1cbec4.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1593868884407-af9a237bffeec.jpg 5240238411 e50bee34-d159-4065-998b-cb04498f5d38
ဆရာရေအေး ရဲ့ မောင်မောင့်ခနာကိုယ်ထဲမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ကျုးကေျာ်နေထိုင် ကို အသံထွက် ဖတ်ပြထားတာပါ.
မောင်ထွန်းသူ - သက်သေခံစာများ
1717 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15935371/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-30%2F86567654-44100-2-5d1e03ec418bf.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1593536494092-fbcd799ef84b1.jpg 5127441609 3ed02485-e694-430e-8e1e-812db3afe14f
ဆရာမောင်ထွန်းသူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ သက်သေခံစာများ ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ရေအေး - မေွးမေလေ့
1425 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15879234/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-29%2F86248481-44100-2-11d58bfc4a34.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1593439270296-39376c79170bc.jpg 5102824807 f088b5c2-afe9-4ff4-8786-7c784cee8579
ဆရာရေအေး ရဲ့ မေွးမေလေ့ ကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ.
တင်မောင်မြင့် - အချစ်မှတ်တမ်း
21349 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15878763/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-07-08%2Fba8e8a098624b771e35c3ec4a5f8edd0.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1593438648416-994cd824f5d15.jpg 5102824808 e3e87181-b9e2-4345-91a7-978cee56ca47
ဆရာတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ အချစ်မှတ်တမ်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ. အပိုင်းလေးတေွ ခွဲပြီးတင်ပါ့မယ်ဗျ.
မူရင်း Nicholas Sparks ရဲ့ Notebook ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ.
စံပယ်ဖြူနု - အပြန်လမ်းဘယ်မှာ လမ်းဘယ်မှာ
2012 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15795865/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-27%2F85788937-44100-2-695c47d08901b.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1593277225495-e70049ed2b6a.jpg 5056696257 a493120e-1619-4742-849a-03505c677828
ဆရာမစံပယ်ဖြူနု ရဲ့ အပြန်လမ်းဘယ်မှာ လမ်းဘယ်မှာ ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
သင့်လူ - လေလွင့်ကြောင်
20562 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15636074/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-06-27%2F4fe6be91b5663d795a69bd7dec97f36c.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592983099358-1ad79b20b2d68.jpg 4968387628 4796f9f3-a0c3-4ec9-b581-47a0dc1d2d65
ဆရာသင့်လူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လေလွင့်ကြောင် ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ.
June 15 2020 မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ကြောင်လေးဘော့ဘ်အတွက် အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဖတ်ပြခြင်းပါဗျ.
လူတယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ကယ်တင်အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ ကြောင်လေးဘော့ဘ် အကြောင်း နားဆင်ခံစားကြည့်ပါဦး.
မြင့်သန်း - မိုးကုန်ပြီးစတစ်နေ့၌ ကျေနပ်စွာလွမ်းဆွတ်ရခြင်း
1200 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15604512/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-23%2F84696584-44100-2-3e17e11158f03.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592931515728-53fb9f144b17e.jpg 4952381292 cad6271c-5beb-47ea-af43-ad1786255404
ဆရာမြင့်သန်း မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဆရာ့ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ
ဂျူး - ရာဇဝင်ထဲမှာ မောင့်ကို ထားရစ်ခဲ့
2340 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15506692/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-21%2F84156290-44100-2-1f3baffe97e85.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592758658649-45c14352276cc.jpg 4896621024 7ae89fb3-9821-486f-b4c6-4cefeeb30c92
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ရာဇဝင်ထဲမှာ မောင့်ကို ထားရစ်ခဲ့ ကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ.
သင့်လူ - ကမ်းတင်ရေမေျာ လူခန့်ခေျာ
1759 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15202980/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-15%2F82380844-44100-2-e3dab4b11886a.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592205362576-e1d469b08f67d.jpg 4741673659 eba4857e-2c7b-49a7-9e09-66263f8005dd
ဆရာသင့်လူ ရဲ့ မေွးနေ့ အမှတ်တရ ဆရာသင့်လူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကမ်းတင်ရေမေျာ လူခန့်ခေျာ ကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ. မူရင်း ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံသား စာပေနိုဗယ်ဆုရှင် Magical Realism စာပေကို ဖန်တီးခဲ့သည့် စွန့်ဦးတီထွင်သူ Gabriel Garcia Marquez ရဲ့ The Handsomest Drowned Man In The World ပါ.
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) - ရာသီပန်း
1197 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15156894/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-14%2F82094033-44100-2-8dad78affa333.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592107867073-93d2e134b4a4b.jpg 4719043244 a165304c-96cf-42ad-893b-34a2fc30bda2
ဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ရဲ့ ရာသီပန်း ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ရေအေး - ပင်လယ်
1983 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15156668/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-14%2F82092979-44100-2-b48bdd098e715.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592107472359-68af718aa5d1e.jpg 4719043245 7d5f4efe-ab49-40da-8a23-aac3820fffcd
ဆရာရေအေး ရဲ့ ပင်လယ် ဆိုတဲ့ အရေးအသားလေးကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
မေဇော် - သတိရချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အလွမ်းတေွ (အက်ဆေး)
842 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15156297/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-14%2F82090192-44100-2-d5b0a7ddfd7eb.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592106587380-e1c64836aa62.jpg 4719043246 b283a979-3817-46ca-ad4e-5bcf588715de
ဆရာမမေဇော် ရဲ့ သတိရချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အလွမ်းတေွ ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေးကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
သခင်ဘသောင်း - ခြေလေးခေျာင်းတော်လှန်ရေး
14709 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15136032/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-06-18%2Fd2f5243348f790aaf7aa5343c7290bfa.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592062281183-1e2c28cd06025.jpg 4711436511 ebe13815-3d3b-42cd-889c-f0b7bec503a6
ဆရာကြီးသခင်ဘသောင်း ဘာသာပြန်မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ ခြေလေးခေျာင်းတော်လှန်ရေး ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
အခန်းစဉ်အလိုက် အပိုင်းလေးတေွခွဲပြီး တင်ထားပါတယ်. အခန်း(၁)ကနေ အခန်း (၁၀) ဇာတ်သိမ်းအထိ အားလုံး (၁၀)ပိုင်းပါ
သရဝဏ်(ပြည်) - တရားခွင်က တစေ
2770 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15128063/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-13%2F81909288-44100-2-1fc80125c2077.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592047683108-ba4d968bfcc3d.jpg 4711436512 88fe451e-cf87-4550-8d2e-688419dcaa18
ဆရာ သရဝဏ်(ပြည်) ဘာသာပြန်ထားတဲ့ တရားခွင်က တစေ ဆိုတဲ့ မူရင်း Charles Dickens ရဲ့ The Ghost at the Trial ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
တော်ကောင်းမင်း - ဆည်းဆာထဲက ကောင်လေး
1353 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15127768/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-13%2F81907950-44100-2-d96025f113db2.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592046598845-898dbd429686b.jpg 4711436513 860974b1-9348-4686-a7ed-c3b5df6086cc
ဆရ ာတော်ကောင်းမင်း ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဆည်းဆာထဲက ကောင်လေး မူရင်း တရုတ်စာရေးဆရာကြီး Yu Hua ရဲ့ စာလေးတပုဒ်ကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ.
ရေအေး - မိုးတောထဲမှာ
1434 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15127574/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-13%2F81906766-44100-2-5dd059a74cca.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1592045903955-280ed999e77c7.jpg 4711436514 2ce7f20e-d633-47e5-936f-054a5be604ff
ဆရာရေအေး ရဲ့ မိုးတောထဲမှာ ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ဂျူး - အသစ်စက်စက် ထာ၀ရ
1170 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15001007/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81128212-44100-2-f18fbf3c4649d.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591808743070-e51f4daa8d424.jpg 4704055826 ed8aa888-f1fa-4d00-a75d-2c23f9ea8093
ဆရာမဂျူး ရဲ့ အသစ်စက်စက် ထာ၀ရ ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
သင့်လူ - ကိုရေခဲ
1541 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15000533/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81124724-44100-2-271117bb39caa.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591808449243-329f0b5e6e943.jpg 4704055827 407767e3-5172-4e09-85ac-2f0a4e4e7bd9
ဆရာသင့်လူ ဘာသာပြန်တဲ့ မူရင်း ဂျပန်စာရေးဆရာ ဟာရူကီမူရာကာမိ ရဲ့ The Iceman ကိုရေခဲ ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
မျိုးဇော်ဝင်း - ကြောင်တွေ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာ
3411 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/15000135/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81121782-44100-2-0051cd9b5316.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591807666382-df30d283b895d.jpg 4704055828 93c62ce8-1dd1-47ef-a6a9-0ddbb4fc25b0
ဆရာ မျိုးဇော်ဝင်း ရဲ့ "ကြောင်တွေ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာ" ဒီစာအုပ်လေး ဖတ်ပြီး သဘောတေွကျမိလို့
အခန်းလေး တစ်ခန်းကို အသံထွက် ဖတ်ကြည့်မိတာပါ
ကြည်အေး - ဂျိုကာမပါဘဲ တုတ်စားခြင်း
1955 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14999223/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81117168-44100-2-c26b49ab39132.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591806223425-56b2b7b3e35b7.jpg 4704055829 1559f87c-d92a-4e82-ac83-00aa89917167
ဆရာမကြီး ကြည်အေး ရဲ့ ဂျိုကာမပါဘဲ တုတ်စားခြင်းကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ
မိုးမိုး(အင်းလျား) - "တရားသစ္စာ မှန်သောအခါကား"
3544 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14998496/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81111095-44100-2-8106ec237fe56.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591805771433-de8a7883207bd.jpg 4704055830 9531a5ae-90b9-4b15-8a37-d7a622788648
ဆရာမကြီး မိုးမိုး(အင်းလျား) ရဲ့ "တရားသစ္စာ မှန်သောအခါကား" ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
မြသန်းတင့် - မိန်းမဟူသည် ယစ်မျိုးရည်သို့ (စုံထောက်)
2911 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14986465/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81046972-44100-2-5c7583f7b65de.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591784377472-3564b0a6e9a3a.jpg 4704055831 18e42ab9-3a00-4db9-be06-96cb844e2c3e
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ မိန်းမဟူသည် ယစ်မျိုးရည်သို့ ဆိုတဲ့ စုံထောက်ဇာတ်လမ်းလေးကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ
မင်းလူ - ဘုန်းကြီးပါးစပ်
2309 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14986214/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81045684-44100-2-b8454b8a8892f.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591783556034-ed8f6928e3a88.jpg 4704055832 da14e916-15a8-43c6-8ced-eef1784dcb2a
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ဘုန်းကြီးပါးစပ် ကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ
ဂျူး - သစ်ပင်နှင့်တူသော မိန်းမ
1244 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14985770/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81043081-44100-2-bbb5e783b91db.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591782323096-37c4bfaa58bba.jpg 4704055833 a30613b8-35d3-4716-8527-d27fba391dee
ဆရာမဂျူး ရဲ့ သစ်ပင်နှင့်တူသော မိန်းမ ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
မြသန်းတင့် - လူမမာစောင့်တစ်ဦး၏ ဖြောင့်ချက်
1998 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14985619/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81042420-44100-2-a8dbf542f216e.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591781958241-6637a0d8b2206.jpg 4704055834 5e402380-31c6-42d6-bfdc-264d322f80b2
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်တဲ့ လူမမာစောင့်တစ်ဦး၏ ဖြောင့်ချက် ဆိုတဲ့ စာလေးကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ဂျူး - သစ်တောလမ်း
1438 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14985457/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81041311-44100-2-1b8352d0402ea.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591781407293-cf0c8cd7d8d96.jpg 4704055835 c0822c5e-b4fa-4018-9b56-aa584e92f951
ဆရာမဂျူး ရဲ့ သစ်တောလမ်း ကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ
ညီပုလေး - ခေွးတရားစီရင်ခန်း
663 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14985250/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-10%2F81040373-44100-2-5cea3f488d5f7.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591780905137-616c3edd53dc8.jpg 4704055836 25b30ae8-276f-4286-8d96-22c1b1361450
ဆရာညီပုလေး ရဲ့ ခေွးတရားစီရင်ခန်း ကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ထားတာပါ.
ဂျူး - အောက်ခြေသန်းတစ်ထောင်
5162 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14845254/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-06-07%2F9d6acf95d67d94da27fa6738debf96f0.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591508736022-9306534de3bc8.jpg 4704055837 95347638-cc48-482a-96a7-93c1d0582457
ဆရာမဂျူး ရဲ့ အောက်ခြေသန်းတစ်ထောင် ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ဖတ်ပြထားတာပါ.
မင်းသုဝဏ် - Oxford သို့ ဒုတိယအကြိမ်ရောက်စဉ်က
1145 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14824018/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-6%2F80024132-44100-2-7f28deef7b797.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591460848894-e32d8f800634d.jpg 4704055838 d3b41264-0819-46b2-830c-e2658f0b9407
ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် ရဲ့ ခရီးသွားစာပေတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Oxford သို့ ဒုတိယအကြိမ်ရောက်စဉ်က ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ဂျူး - ပြတင်းပေါက်
1937 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14823751/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-6%2F80022779-44100-2-e5ceb3f56a904.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591460345682-688da3957c1ca.jpg 4704055839 9a5e6ee4-bf96-463b-88ce-18ccea4d80eb
ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ ပြတင်းပေါက် ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
မင်းလူ - ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုး ခေါ်သလဲလို့ မောင်ဘုရားကိုပြောစမ်းပါ နှမတော်လေးရယ်
3683 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14823533/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-6%2F80020992-44100-2-55d9afc1be995.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591459939319-2d9cf33324838.jpg 4704055840 9bf1e42c-fab5-4b81-a6a5-be24682454bf
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုး ခေါ်သလဲလို့ မောင်ဘုရားကိုပြောစမ်းပါ နှမတော်လေးရယ် ကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ.
တင်မောင်မြင့် - ထိုအနမ်း
3520 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14822826/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-6%2F80017032-44100-2-0377735a88e39.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591458864303-140e46777ef46.jpg 4704055841 864f72a8-c0c9-46ac-b271-cae383034769
ရုရှားစာရေးဆရာကြီး Anton Checkhov ရဲ့ The Kiss ကို ဆရာတင်မောင်မြင့် က ထိုအနမ်း လို့ ဘာသာပြန်ထားတာပါ.
ကျနော်က အသံထွက်ပြီး ဖတ်ပြတာပါ.
မြသန်းတင့် - နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နည်း
2929 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14771061/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-5%2F79701001-44100-2-a62ccd9af890e.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591354003209-3b2c97621ec84.jpg 4704055842 8172532e-c51b-4cd6-86dd-b658ad4eaca5
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ယန်းပေါလ်ဆာ့တ်ရဲ့ ပြင်သစ်ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ် ဖြစ်တဲ့ "နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နည်း" (Jean Paul Satre's Erostratus) ကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ကြည့်တာပါ
ဇော်ဂျီ - ကောက်ရိုးသင်္ခါရ နှင့် သံသင်္ခါရ
610 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14770793/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-5%2F79695698-44100-2-28c4c9d7ee2b1.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591354094280-02a3a05cb8497.jpg 4704055843 93e6e20d-5de4-4aaf-8923-b071c2a0cfa9
ဆရာဇော်ဂျီ ရဲ့ ခရီးသွားစာပေတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ကောက်ရိုးသင်္ခါရ နှင့် သံသင်္ခါရ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြထားတာပါ
ဂျူး - ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း
2034 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14770030/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-5%2F79694755-44100-2-40d5c635c3cd8.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591354233432-7d9f09a51f572.jpg 4704055844 f31dbea0-e09f-4c41-a1cc-61669807e231
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ.
ဂျူး - ချစ်ခဲ့ဖူးသော
1868 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14769863/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-5%2F79693675-44100-2-8dd6663d5b567.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591354295571-cf2d703764058.jpg 4704055845 e65c3fde-ff10-47c3-b3e7-3a4c154cc327
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ချစ်ခဲ့ဖူးသော ကို အသံထွက်ဖတ်ပြထားတာပါ.
ကြည်အေး - နွမ်းလျအိမ်ပြန်
6857 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14769430/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-06-05%2Fcaf03b85646795b4682114cac815d999.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591354417441-fed4a72845eb4.jpg 4704055846 bc5a6026-6a86-4ebd-aaec-89443f11a3b5
ဆရာမကြီး ကြည ်အေးရဲ့ နွမ်းလျအိမ်ပြန် ကို ၃ပိုင်းခွဲပြီး အသံထွက်ဖတ်ပြထားတာပါ.
သင့်လူ - စူး
16419 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14743279/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2020-06-05%2Fa2422529c831125f127c1af7f6b5b01a.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591354535623-00a2b20c17b46.jpg 4704055847 f32f90fb-8585-438f-b4a8-f7bdd12a511b
မူရင်း ဂျပန်စာရေးဆရာ Ryu Murakami ရဲ့ Novel တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Peircing ကို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဆရာသင့်လူ ရဲ့ စူး ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ. အစအဆုံး အပိုင်း ၉ ပိုင်း တင်ပေးပါ့မယ်.
ဂျူး - ချစ်သူ့အိမ်
2526 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14633115/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-2%2F78846477-44100-2-508483cc1ac2f.m4a https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591092126924-3a12410c6c572.jpg 4704055848 ba6c3a6f-35cf-470a-9b5f-3b1ceafc5819
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ချစ်သူ့အိမ် လေးကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ
မင်းလူ - နေပူမိုးရွာ
2376 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14630997/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-2%2F78829810-44100-2-0a2321ca724fb.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591090351597-3b9892c62e1.jpg 4704055849 12272065-6da2-46b5-a042-0fc9f4bd6b31
အသံထွက်ဝတ္ထုတို --- Support this podcast: https://anchor.fm/rodney-sann-lwin/support
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) - ယာယီပိတောက်
809 https://anchor.fm/s/2472beb4/podcast/play/14630287/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-2%2F78830776-44100-2-61a4451e59775.mp3 https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/6014997/6014997-1591090889829-75648b50826b1.jpg 4704055850 cbce1622-9c9a-463f-a28d-bad4f2608598
ဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ရဲ့ ယာယီပိတောက် ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ